परिवर्तनका लागि आन्दोलन आवश्यक छैनः सुवासचन्द्र नेम्वाङ
काठमाडौंः नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष नेम्वाङले परिवर्तन चाहनेले जनताको मन जितेर संसदमा गए सहजै जुनसुकै परिवर्तन गर्नसक्ने बताए ।
संविधान जारी भएसँगै देशको शक्तिको रुपमा जनता रहेकोले जनताले चाहेमा सबै खालका परिवर्तन संसदबाटै गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
कुनै दल र व्यक्ति मन नपरे सहजै पार्टी परिवर्तन गर्ने र खोल्ने अधिकार संविधानले दिएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष नेम्वाङले
जनताको उन्नतिको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए ।
‘मुलुक दुई तहको संघीय संरचनामा जानुपर्दछ’
कर्णालीः राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुक दुई तहको संघीय संरचनामा जानुपर्नेमा बताएका छन् ।
राप्रपा नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले प्रदेशबाहेक संघ र स्थानीय तहको संरचना मुलुकका लागि हितकर हुने बताए ।
अध्यक्ष थापाले भने, ‘विसं २०६३ देखि १६ वर्षसम्म राजतन्त्रकै मुद्दा लिएर कठिन सङ्घर्ष गरियो, तर राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुने देखिएन र हामीले त्यो मुद्दा त्याग्यौँ, अब सुशासनको माध्यमबाट हिन्दू राज्यको स्थापना गर्न लोकतन्त्र र हिन्दूराज्यको एजेण्डा अगाडि सारेका छौँ ।’
उनले दुई तहको संघीयता स्वीकार गरिएको बताए । सोही क्रममा अध्यक्ष थापाले धर्म परिवर्तनको महामारीले मुलुक खतराको अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई उचित कदम चाल्न आग्रह गरे । सनातन धर्मका नाममा समाजमा रहेका रुढीवादी, परम्परागत गलत संस्कृतिलाई समाप्त पार्न राप्रपा नेपालले देशव्यापी अभियान थाल्ने उनको भनाइ थियो ।
रवि लामिछानेको पार्टी आयोगमा दर्ता, गोलाकार भित्रको घण्टी चुनाव चिन्ह
काठमाडौंः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । सञ्चारकर्म छोडेर रोजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने नेतृत्वको दललाई निर्वाचन आयोगले शुक्रबार दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।
पार्टीको नामका विरुद्धमा परेका २ उजुरी आयोगले खारेज गरेको छ । ऐनमा कतै पनि कुनै नामका आधारमा पार्टीको नाम हुने वा नहुने भन्ने व्यवस्था नभएकोले सो उजुरीको कुनै औचित्य नभएको आयोगको ठहर छ ।
स्वतन्त्र शब्द दलको नाममा राख्न नहुने माग गर्दै आयोगमा लामिछानेको पार्टीविरुद्ध २ वटा उजुरी परेको थियो । प्रस्तावित चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ लाई पनि आयोगले आधिकारिकता दिएको छ ।
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु हेरफेर गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री हेरफेरको विषय चर्को रुपमा उठेको छ । तर, यही विषयले पार्टीको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी विवादको चरम उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा डा.बाबुराम भट्टराईको राजनीति के होला भन्ने चासो बढेको छ । हाल जसपामा संघीय परिषद अध्यक्ष रहेका भट्टराई सक्दासम्म जसपाको बहुमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा छन् ।
यसो गर्न सक्दा उनको राजनीतिक भविष्य सहज रुपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ । अन्यथा फेरि उनले नयाँ जोखिम लिनुपर्ने हुन सक्छ । बाबुराम पक्षधर नेताहरुको भनाईमा फेरि नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि जानेतिर डा. भट्टराईले सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि समेत तयार भएर डा. भट्टराईले जसपामा आफ्नो भूमिका खोजेका छन् ।
शन्तिपूर्ण राजनीतिबाट भन्दा छिटो सशस्त्र युद्धबाट परिवर्तन सम्भव हुने विश्वासका साथ २०५२ सालबाट जनयुद्ध शुरु गर्दै सशस्त्र युद्धमा होमिएका डा.बाबुराभ भट्टराई शान्ति प्रक्रियापछि आफैँ प्रधानमन्त्री भएर देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । तर, उनैले नेतृत्व गरेको सरकारले संविधान घोषणा गर्न नसकेको अपजस लिनुपर्‍यो । दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ साल फागुन ३ गते संविधान जारी हुँदा सम्म नेकपा माओवादीमा रहे डा. भट्टराई ।
संविधान जारी भएपछि माओवादी नेतृत्व प्रचण्डबाट पार नलाग्ने भन्दै माओवादी पार्टीसँगै कम्युनिस्ट विचार नै त्यागेको घोषणा गरे । माओवादी छाडेको करिब एक बगर्ष पछि २०७३ साल जेठ ३० गते ‘नयाँ शक्ति’ पार्टीको को घोषणा गरे । तर, नयाँ शक्ति पार्टीले २०७४ सालको चुनावमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । आफूले सोचे जस्तो पार्टी र चुनावी नतिजा नआएपछि डा. भट्टराईले २०७६ साल वैशाख २३ गते संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरेर समाजवादी पार्टी बनाए । पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षमा उपेन्द्र यादवलाई राखेर आफू दोस्रो तहको नेतृत्व संघीय परिषद अध्यक्ष बस्न तयार भए ।
समाजवादी पार्टी बनाएको एक वर्षमै २०७७ वैशाख १० गते सबै मधेस केन्द्रित दल एक ठाउँमा हुने गरी जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) निर्माण भयो । तर त्यो एकता पनि लामो समय टिक्न सकेन । अहिले यो दलबाट पूर्व राजपा छुट्टिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरम बनाइसकेको छ । जसपामा बाबुराम नै संघीय परिषद् अध्यक्षकै हैसियतमा छन् ।
तर, केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकलौटी रुपमा अगाडि बढेकोले समस्यामा छन् डा. भट्टराई । राष्ट्रिय सभाको चुनाव र स्थानीय तहको चुनावमा यादवले एकलौटी रुपमा उम्मेदवारहरु तय गरेको भन्दै डा. भट्टराई पक्ष असन्तुष्ट छ । नेताहरुका अनुसार असन्तुष्टि पार्टी फुटसम्म जान सक्छ । पार्टी फुटाउनु पर्दा डा.भट्टराईले फेरि नयाँ पार्टी गठन गरेर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने जसपामा डा.भट्टराईसँग देखिनेगरी बहुमत छैन् । तर, उनको प्रयत्न जसपामा बहुमत पुर्‍याउने वा उपेन्द्र यादवलाई साइजमा राखेर आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सहज बनाइराख्ने प्रयास डा. भट्टराईको देखिन्छ ।
आफु राजनीतिक रुपमा संकटमा पर्न सक्ने आंकलन गरेर नै डा. भट्टराईले प्रचण्डसँग भेटेका छन् । प्रचण्डबाट पार नलाग्ने भनी पार्टी छोडेर हिडेपछि उनले प्रचण्डसँग पार्टी एकताकै विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरेका थिएनन् । तर, बिहीबारको भेटमा डा.भट्टराईले कम्युनिस्ट समेत मिलेर समाजवादी पार्टी बनाउन सकिने प्रस्ताव राखेको नेताहरु बताउँछन् । डा.भट्टराईको यस्तो प्रस्तावले पनि उनी संकटमा छन् भन्ने देखाउँदछ ।
काठमाडौं : सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ । गत २०७६ साल बैशाखमा एक भएको जसपा पुन फुटको दिशामा जाने निश्चित भएको हो । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमतिमै आ–आफ्नो तरिकाले अघि बढ्न तयार भएपछि जसपा फुट्ने निश्चित भएको हो । अध्यक्षद्वयले बुधबार जसपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भेट गरेर एक ठाउँमा बसेर जान नसकिने निर्णय गरेका थिए ।
‘उहाँहरू सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छुट्टिन तयार हुनुभयो भन्ने सुनेको हो । अरू कुरा थाहा छैन,’ जसपाका सांसद अमृता अग्रहरीले बताइन् । दुई अध्यक्षहरु सहमतिमै विभाजित हुन लागेको उनको भनाई छ । वैकल्पिक शक्ति बन्ने ध्येयका साथ पार्टी एकता भए पनि त्यसलाई संगठनात्मक स्वरुप दिन नसकेकाले सहमतिमा विभाजित हुनुपर्ने पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह भने उपेन्द्र पक्षसँगै हुने भएको छ । भट्टराई पक्षधरको बहुमत पुग्ने सम्भावना कम भएकाले नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने देखिएको हो ।
जसपाको ३४ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा बाबुरामको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिदैँन । यद्यपि, महिन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, गोविन्द चौधरी, अमृता अग्रहरी, रामनरेश राय यादव, हिसिला यमी, हेमराज राई, गंगा श्रेष्ठ, डम्बर खतिवडा, प्रशान्त सिंह, दुर्गा सोब, भक्तबहादुर साह बाबुरामतिर जाने जसपाका केही नेताको विश्लेषण छ । तर, बाबुरामको पक्षमा रहेका नवलकिशोर साह, गजाधर रोहिता यादव र मोहम्मद इस्तियाक राईले उनको साथ पहिला नै छोडिसकेका छन् ।
‘सायद छिट्टै केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला बोलाइन्छ होला । नेताहरु छलफल गर्दै हुनुहुन्छ’ भट्टराई निकटका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टीका सबै निर्णयमा यादवले एकलौटी गरेको भन्दै जसपामा उपेन्द्र र बाबुराम पक्षबीच विवाद चर्किँदै गएको थियो।
तत्पश्चात् पार्टीको विधानअनुसार अर्को अध्यक्ष चयन गर्न बावुरामले माग गरेका थिए । तर, त्यसमा यादव सहमत नभएपछि भट्टराई विभाजनकै पक्षमा उभिएका हुन् । गत २०७६ वैशाखमा यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम र भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएर संघीय समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । पुन त्यसपछि संघीय समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच २०७७ वैशाखमा एकता भएर जसपा गठन भएको थियो ।
‘बाबुरामजीले सौहर्दपूर्ण वातावरणमा जसपाबाट अलग हुन चाहनु भएको छ, यो कुरा उहाँले उपेन्द्र यादवजीसँग पनि राखि सक्नु भएको छ’, उनले भने, ‘उपेन्द्र यादवले पनि हुन्छ भनिसक्नु भएको छ, सायद बाबुरामजी त्यसको तयारीमा लाग्नु भएको छ जसपाका कार्यकारिणी सदस्य गज्जाधर यादवले जानकारी दिए ।’ नेताहरु सौहार्दपूर्ण वातावरणमै जसपाबाट अलग हुने उनको भनाई छ ।
तर, गत भदौमा जसपा विभाजन भएर महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि यादव र भट्टराईले पार्टी सञ्चालन गर्दै आईरहेका थिए । तर, उनीहरुबीच पनि खटपट बढ्दैँ जाँदा जसपा पनि विभाजन हुने स्थिती देखापरेको हो । जसपामा अहिले २१ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका छन् ।
काठमाडौं : नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु छरिएर रहन नहुने मान्यता राख्दै आएका वामदेव गौतमले बुधबार नयाँ पार्टी नै घोषणा गरे । पार्टी घोषणा गरेपछि उनको छटपटी निकै बढेको छ । उनी कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर सके सबै कम्युनिस्टहरुसँग एकता नसके आफ्नो पार्टीसँगको एकताको पहल गरिरहेका छन् ।
वामदेव गौतमले बिहीबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरे । ओलीलाई भेट्न गौतम बिहीबार बिहान बालकोटस्थित ओली निवास गएका थिए । भेटमा गौत्तमले ठूलो पार्टीको हैसियतमा एमालेले कम्युनिस्टहरुबीच एकताको अभियान सुरु गर्नुपर्ने मत राखे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका प्रचार विभाग प्रमुख निमकान्त पाण्डेका अनुसार सकेसम्म वाम एकीकरण, एकीकरण नभए चुनावी मोर्चा निर्माण गर्ने प्रयास अन्तर्गत गौतमले ओलीलाई भेटेका हुन् ।
गौतमले ओलीपछि अन्य नेताहरुसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । प्रचण्डसँग पनि भेटेर गौत्तमले कम्युनिस्टहरुबीच एकता गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । नेताहरुका अनुसार, कम्युनिस्ट एकताका लागि सबैले लचकता अपाउनुपर्ने प्रस्ताव गौत्तमले प्रचण्डसामु राखेका छन् ।
गौतमले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतसँग पनि भेट्ने तय भएको छ । निरन्तर कम्युनिस्ट एकताका लागि अभियान चलाउँदै आएका गौत्तमको पार्टी नै घोषणा गरेपछि छटपटी बढेको हो । गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा १४ असारमा मात्रै नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेका छन् । बीडी कार्कीलाई सचिव राखेर गौतमले घोषणा गरेको ७५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको एकता अभियानले तीन महिनासम्म एकताको प्रयत्न गर्ने जनाएको छ ।
एकता नभए चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने गौतमको तर्क छ । यदि तालमेल समेत नभए कम्युनिष्ट आन्दोलन सकिने उनले बताउँदै आएका छन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फेरि ब्युताउन २ जेठ २०७५ को सहमति संशोधन गर्न सकिने गौतमको सुझाव छ ।
त्यसबेला दुई अध्यक्षको व्यवस्था भएपनि अब एकल अध्यक्ष राखिनुपर्ने गौतमको प्रस्ताव गरेका छन् । अर्का सहअध्यक्ष र कार्यकारी महासचिवको व्यवस्था गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । गौतम नेकपा विभाजन हुँदै कतैपनि लागेका थिएनन् । तर त्यसबेलाको नेकपा अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय राजदूतबीच शिष्टाचार भेट
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
उनले बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन् । यस अगाडि श्रीवास्तवले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए ।
निर्वतमान राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई भारत सरकारले विदेश सचिवमा नियुक्त गरेपछि श्रीवास्तवलाई नयाँ राजदूतको रुपमा पठाएको हो।
भारतीय राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणपत्र पेश
काठमाडौंः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिभवन शीतल निवासमा आयोजित सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासहित नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक २७ गते बस्ने, दुई एजेण्डा तय
काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । असार २७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू उपस्थित हुनेछन् ।
कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन-२०७९ को समीक्षा र विविध गरी दुई वटा एजेण्डा तय गरिएको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
जसपा केन्द्रीय समिति बैठक वीरगन्जमा बस्ने
काठमाडौंः जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठक वीरगन्जमा बस्नेगरी असार २७ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले बताए ।
पार्टीभित्रको विवाद चुलिएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको हो । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हालै सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका थिए । नयाँ मन्त्रीलाई पठाउने गरी मन्त्री फिर्ता बोलाएका यादवले कारबाहीको अधिकार पनि आफैँले राखेका थिए ।
उनको निर्णयप्रति बाबुराम भट्टराई खेमाका नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।